ဒူးလ်ဝစ်ချ်ကောလိပ်က ရန်ကုန်တွင် ကျောင်းနှစ်ကျောင်း ဖွင့်မည်
ရန်ကုန် ဗြိတိန်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်သော Dulwich College International (ဒူးလ်ဝစ်ချ်ကောလိပ်)က Yoma Strategic Holdings နှင့် မိတ်ဖက်အဖြစ်ပူးပေါင်းကာ ရန်ကုန်တွင် တက္ကသိုလ် နယ်မြေနှစ်ခု ဖွင့်လှစ်မည်ဟု ကြေညာလိုက်သည်။ Dulwich College Yangon ဟူ၍ ခေါ်ဆိုမည့်.
မြန်မာလေတပ်အတွက် ရုရှား ဂျက်တိုက်လေယာဉ်သုံးစီး ရရှိမည်
လေယာဉ်ဝယ်ယူရေး စာချုပ်အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်
မြန်မာစစ်တပ်သို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ ရောင်းချရန် အိန္ဒိယ တာတာကုမ္ပဏီ မျှော်မှန်း
ထိုင်းစစ်တပ်သို့ စစ်ဘက်သုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ ရောင်းချရန် သဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်း အလားတူရောင်းချခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ဈေးကွက်ကို ချဲ့ထွင်ရန် အိန္ဒိယ၏ Tata Motors ကုမ္ပဏီက မျှော်လင့်နေသည်ဟု Business Insider India ၏ သတင်းတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ထိုင်းစစ်တပ်သို့ စစ်သား ၁၁ ဦးတင်နိုင်သော ၂.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးက မြို့နယ်ပေါင်း ၄၅ ခုထဲမှာ အပေါင်ဆိုင်ပေါင်း ၂၅၀ ကို မြို့တော်စည်ပင်က တရားဝင် ခွင့်ပြုပေးထားပြီး တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ လိုင်စင်ကြေး မတူကြပါဘူး ဟိန်းကိုစိုး ရေးသားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးက အခြေခံလူတန်းစားအများစုက ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိကြတဲ့အတွက် ဝင်ငွေနည်း ပြည်သူတွေအတွက်တော့ အပေါင်ဆိုင်တွေကသာ သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်.
ဝန်ထမ်းလစာနှင့် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ တိုးပေးရန် အကြံပြုတင်ပြထားဟု သူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ကော်မရှင်က အစီရင်ခံစာဖြင့် အကြံပြု ပေးပို့ထားသည်
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့များအားလုံး ပါဝင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်
Min Min ရေးသားသည်။
အခုချိန်မှာတော့ မြန်မာ့အားကစားနည်းများထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့သိုင်းဟာ အခြားအားကစားနည်းများထက် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းခြင်း ခံနေရပါတယ် သီရိဟန် ရေးသားသည်။ ရှေးခေတ်က သိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ တုတ်တစ်မျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သိုင်းဆိုတာ ရှင်ဘုရင်တွေရဲ့ အဆောင်အယောင်ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိုင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကို “သဘောကတော့ ကာကွယ်တဲ့ တုတ်တစ်ချောင်းပေါ့”.